Intokazi esencane esingene shi embonini yensangu - Bayede News
Ayizange idikibaliswe wukugqoza kwamathuba kepha yazikhandla yasebenza
Igama lakhe nguNokukhanya Nxumalo. Le ntokazi esencane izalwa eMgungundovu ineziqu zezolimo ezixhantile kwezolimo, okuyiBachelor of Technology neDiploma yakhona. Ngonyaka wezi-2015 kuya kowezi-2016 ube ngomunye owaba nenhlanhla yokuqokwa uHulumeni wesifundazwe iKwaZulu-Natal ukuya phesheya eyoqeqeshelwa ezolimo okubandakanya nokufundela ukufuya izilwane ezifana nezingulube ezingeni eliphezulu. Lolu hambo abe eluthathe nozakwabo abasebancane lwabe lubandakanya abantu abasha abangaphezu kwamashumi ayisithupha. Lwabe luyingqayizivele kuye, futhi babenenkolelo yokuthi luzobalethela impilo engcono, kwazise bahamba ngesethembiso sokuthi bayothi nxa bebuya, bathole amathuba emisebenzi kuHulumeni ukuze basize imiphakathi yabo. Abanye babezosizwa ekuthenini baqale awabo amabhizinisi ukuze basize ukukhuphula izinga lomnotho waKwaZulu-Natal.
Emuveni kokuthi uHulumeni wesifundazwe wenze into encomekayo kulaba bafundi ngokutshala imali eyizigidi ebafundisa eDenmark, esizindeni esibizwa ngokuthi yiDalum Landbrugsskole. Umfundi ngamunye wabe exhaswe ngemali eyizi-R500,000.
Laba bafundi ababeqeqeshwa ezingeni eliphezulu kangaka sebehlome ngolwazi olusezingeni eliphezulu kangaka, iningi labo lazithola selisele dengwane. Laba bafundi ababehambe ngokwezikhawu beya phesheya, iningi labo lisafuna imisebenzi, okuyinsakavukela kulezi zinsuku eNingizimu Afrika. Yize ingcosana yabo igcine ithola ukutohoza lapha nalaphaya, kepha abaningi bagcina bengondingasithebeni.
Njengananoma yiyiphi into emhlabeni, ukukwazi ukuzimela ebhizinisini kuyinto engamele yencikiswe kuphela kumuntu osuke ekusizile ngaleso sikhathi ukuthi uyephambili, kepha yinto wena mnikazi wendaba qobo okumele ube nogqozi ngayo nempilo nje yonkana. Idinga ube nomkhombandlela ocacile ohambisana nawe ukuze nxa kungalungi lapha bewethembele khona, ube nazo izindlela zokuchusha uze ufinyelele lapho uphokophele khona.
Lokhu yinto eyenziwe yile ntokazi esencane yakoMkhatshwa, okuthe nxa ibuya, ayangafana nabanye ozakwabo abaningi abazithole bengondingasithebeni belinde abakuthenjiswayo.
UNokukhanya, usesebenze nomphakathi wasezintabeni zoKhahlamba esiza ukuthuthukisa abantu ngaphansi kohlelo lwemifelandawonye. Okumanje usebenzela iCathedral Peak Wine Estate ukutshala amagilebhisi. Kepha esithanda ukukuphawula kakhulu namuhla umsebenzi wakhe wokuzibandakanya nemboni ekhulangamandla yensangu. Ngaphambilini sike saloba kule ngosi ngobumqoka bale mboni nanezindlela ezimele mazilandelwe ukuthuthukisa aboHlanga kuyo, kwazise njengoba sekukhona ukuxegiswa kwemithetho eyengamele ukusetshenziswa kwalesi sihlahla. Ogimbela kwesakhe sebeqalile ukuyigwamanda njengezinye izimboni lapho sekulukhuni satshe ukuthi aboHlanga bangene kuzo.
Ngenyanga uMandulo ngowezi-2018, uHulumeni wavulela ukuthi insangu isingakwazi ukusetshenziswa isetshenziselwa ukubhema kuphela nxa uzitshalele yona kwakho phansi kwemigomo ethizeni, kanjalo nokuthi isingakwazi ukusetshenziselwa ukwakha imithi yokwelapha. Leli khambi lidala kakhulu kwaboHlanga kwazise kusuka emandulo bebekwazi ukuzigxobela lona lithakwe nezinye izihlahla kumbe lisetshenziswe ngokwesilinganiso esifanele ukuze lelaphe izifo thizeni ezifana nomdlavuza. Nakulokhu-ke, uHulumeni ulivumele leli khambi ngemuva kokuthi sibonile amanye amazwe afana ne-USA nawo evumela ukusetshenziswa kwalesi sihlahla ngokusemthethweni.
OlukamaNxumalo udaba othi engungoti ekufuyweni kwezingulube nalo luqale ngezikhathi ebona ukuthi iminyezane yezemfundo lena ayizukumsiza ngalutho nxa engathungathi amanye amathuba. Yilapho kuthe nxa esezwile ngale mboni, wabona ukuthi akazibandakanye nayo ngokushesha isafufusa nje. Sikhuluma naye, uzichaze njengomuntu ongahlaliseki phansi nxa kukhona into ayiphokophele empilweni. Ubeke nokuthi yize kwabaphatha kabuhlungu ukuthi uHulumeni wesifundazwe angabanikezi usizo ababeludinga ukuze baziqhube nempilo njengabantu abasebasha, kepha akumthunazanga lokho. Ugqozi lokwenza into, kumele lusuke kuwe ngaphakathi ukuze uphumelele, ephetha.
Esichazela ngokuthi ungena kanjani kule mboni, ukubalulile ukuthi akulula njengalokhu abanye becabanga, kwazise kusuka emalini yokuthola imvume yokusebenza, kuya emalini yembewu ehloliwe, ukwakha umpheme lakukhuliselwa khona insangu esiza ukwelapha, ukuvikeleka kwendawo okumele ubeke ngisho abaqaphi kuyo, kuze kuba sekusihluzeni lesi sihlahla emuva cishe kwezinyanga eziyisithupha, isiyonke imali odinga mawube nayo, cishe icela esigidini samarandi. Lokhu kwenzeka ehhekeni elilodwa nje vo. Aphinde wakubalula kakhulu ngale mboni ubumqoka bokuthola imboni eyothi mayithathe lo mkhiqizo nxa sewuvunile. Esinye sezithiyo ezinkulu kakhulu lesi nxa ungaqaphele. Lo mkhiqizo uthandwa kakhulu ngamazwe aphesheya, kwazise yiwona asebenzisa kakhulu lezi zithako zensangu. La mazwe kuthi esehlanganise zonke lezi zithako nokunye, aphinde asithengisele khona lapha eNingizimu Afrika lomkhiqizo usuphelelisiwe. Ubuye ngapha kwelakithi usumba eqolo. Yize zikhona izimboni kuleli ezisebenzisa lezi zithako, kepha zisencane kakhulu, okanti aboHlanga bona ababonwa nangalukhalo.
Ukwazi kabanzi ngale mboni ukuthi uyithola kanjani kwayona imvume yokusebenza, landela izinkulumo zethu ku-Amandla Omnotho ngoLwesibili mhla zili-16 ku Ndasa kusuka ngehora leshumi kuya kweleshumi nambili, lapho sizobe sicobelela abantu ezinkundleni zobuxhakaxhaka bethekhinoloji ngezindlela zokungena kule mboni. Ukuthola kabanzi thintana nathi ku:-info@amandlaomnotho.co.za kumbe enombolweni yeWhatsapp ethi 0822252217
nguGugulethu Xaba Mar 12, 2021